"Mahavoaka ny Mazarota amin’ny fotoanany va ianao? Ary mahatondra ny Bera mbamin’ny zanany va ianao?" Joba 38:32
"Raha jereko ny lanitrao, izay asan’ny rantsantànanao, sy ny volana aman-kintana, izay noforoninao, inona moa ny olona, no ahatsiarovanao azy?" Salamo 8:3-4
Rehefa lohataona dia mahafinaritra ny mitsotra eny ambony ahi-maitso amin’ny alina, mijery ny lanitra. Izany no fotoana ipoiran’ny tainkintana mifanesy ka mahatalanjona antsika. Rehefa alina tsy misy rahona, dia mahasondriana mandrakariva ny mandinika ny zavatra samihafa eo amin’ny lanitra, ny firindrany sy ny hakantony, ary ny mitady ny kintana Bera, ny Telonohorefy, ny Ikotokelimiadilaona. Nefa na niezaka hahalala anaran-kintana maro aza isika, dia tsy maintsy miaiky fa tsy hahafantatra azy rehetra! Dia tonga saina isika fa bitika dia bitika, manoloana ny tsy hita lany eo imasontsika.
Misy anefa Iray Izay afaka manisa sy manonona ny anaran’ny kintana rehetra : “Milaza ny isan’ny kintana Izy (Jehovah); samy tononiny amin’ny anarany avy ireny rehetra ireny” (Salamo 147:4). Vavolombelon’ny heriny sy ny fiandrianany no eo anatrehantsika. Isainy koa ny rahona, izay mizotra misoko sy mihelina (Joba 38:37).
Manisa ny diantsika ihany koa Andriamanitra (Joba 14:16), ary na ny volon-dohantsika aza dia voaisany (Matio 10:30). Voafatrany ny ranomasontsika (Salamo 56:8).
Ilay nahary izao rehetra izao sy mihazona azy dia mitsinjo ahy, izaho izay zava-manana aina tena bitika sy marefo ity, miohatra amin’ilay tontolo midadasika. Tsy misy antsipiriany eo amin’ny fiainako ka tsy omeny lanja. Mahafantatra sy tia ahy manokana Izy, noporofoiny izany tamin’ny nanomezany ny Zanany Lahitokana. “Izao no nanehoana ny fitiavan’Andriamanitra antsika: Andriamanitra naniraka ny Zanany Lahitokana tamin’izao tontolo izao, mba hahavelona antsika amin’ny alalany” (1 Jaona 4:9). Dia ho vitako ve ny tsy hiraika, eo anatrehan’izany fitiavana izany?